Waamicha ABO Oromoota Miseensa ABO Turanii Kaayyoo Bilisummaa Oromoo Qabatanii fi Jaarmoolee Oromo walaba tahanii biilisumma Oromof dhaabatanif - Ayyaantuu News
Waamicha ABO Oromoota Miseensa ABO Turanii Kaayyoo Bilisummaa Oromoo Qabatanii fi Jaarmoolee Oromo walaba tahanii biilisumma Oromof dhaabatanif Fulbaana 13, 2012
Sabni Oromoo bara dhibba caalaa gabrummaa jala ture keessatti qabsoo adda addaa geeggeessaa ture. Yeroo tana keessatti diinni Oromoo adda qoqqoodee maqaa adda addaa itti kennuu dhaan eenyummaa isaayyuu if wallaalchisuuf hedduu carraaqe. Haa tahu malee Oromon sirna kana amanfatee hin fudhanne. Sadarkaa duraatti fincila qindoomina hin qabne naannoo naannoo dhan geggeessaa turee adeemsa keessa dhaaba biyya guutuu hammatutti geeddarate. Akka kanaanis tokkummaa sabichaa deebisee gadi dhaabee sabboonummaa dhas dagaagse.
–Guutuu Dokumenti kanaa – www.oromoliberationfront.org
21 comments - What do you think? Posted by admin - 13/09/2012 at 4:18 pm Categories:
21 Responses to “Waamicha ABO Oromoota Miseensa ABO Turanii Kaayyoo Bilisummaa Oromoo Qabatanii fi Jaarmoolee Oromo walaba tahanii biilisumma Oromof dhaabatanif”
Beka Biyya says:	13/09/2012 at 4:30 pm	Wamichi kuni maaliif amma taye yaa lammii koo?Qabsoo sabaa gaggeessaa jirra moo Oromoo wal saamaa jirra?
Tole kaa Oromoofiis waaqayyootu jiraa.
Waaqumaa says:	13/09/2012 at 9:43 pm	Nageenyi haa dursu! Akkuma beekamu, ilmaan Oromoos tanee warri dhiiga Oromoo of keessaa hin qabne, rakkina ilmaan Oromoo irra qaqqabuuf dadhabinuma dhaaba ABO-ti komachaa jirra. Rakkinni dhalate rakkina kaayyoo ABO otoo hin taane, rakkina hooggantoota dhaaba kanaati. Dhaabni kun bakka heddutti qoodamuu kan danda’es dadhabbiifi ofee tawuu jaroota kanaa irraan kan ka’e. Fakkeenya fudhachuuf fagoo dhaquu hin barbaachisu. TPLF ilaalun ni danda’ama.
1. “Diinni Oromoo addadda qoodee —” jettu. Diinni Oromoo addadda hin qoodne. Hooggantoota ABO-tu ilmaan Oromoo addadda qooda.
2. “Misaansa ABO turanii —” jettu.
Jaroonni kun maalif MISEENSUMMAA isaanii dhiisani? Waan rakkoon hoogganoota bira jiruufi.
3. “Miseensa ABO turanii fi —” jettu. Dhaabni ABO kaayyoo bilisummaati. ‘Uummata Oromoo bilisa baasuf dhaabate (Taddessaa Birruu faa). Bu’aan dhaabni kun buuses salphaa miti. Garuu, warri hardha dhaaba kana, abdii bilisummaa ilmaan Oromoo, adaraa gootota Oromoo, dhaaba dhiiga ilmaan Oromoo (sabontoota Oromoo)hedduun hijaarame, dhaaba namni isaa jedhee lakkoofsi isaa hammana jedhamee hin tilmaamamne mana hidhaatti dararamee, qabeenya isaa saamamee, biyya abbaa isaatii dhiisee baqate, barattoonni mana barumsatii hariyamte, warri ardha hoogganan/ttan, ilmaan Oromoo tokko taasiftanii akka bilisa ba’an, akka biyya isaanitti, qe’ee isaanitti mirga isaanii kabajachiifatan gochuu dhiiftaniiti addadda qooddanii, dhaaba kanaa (ABO) maqaa balleesa jirtu. Dhaabni kun waan dhaaba maqaa ilmaan Oromoo ta’ef, abdii ilmaan Oromoo, dhaaba sabbontoota Oromoo waan tayeef hundi keessanuu maqaadhuma kanaan of muggaaftani. Nama burjaajessitani.
Fak. Ani Oromoodha. Waamicha kan nan fudhadha. Kun mirga kiyyas. Diqama kiyyas. Eenyutu na waame jedheen eenyu bira dhaqa? Lencoo, Daawut, Kamaal? Eenyu biran dhaqa? Jiddu galeessi (center) eessa jira? Gaaffin kun gaaffii ilmaan Oromoo hundaati.
Gaafa tokko namni dabballee ABO taye (ofiin jedhe)tokko, waayee rakkina uummataatifi kaayyoo ABO dubbatee, booda gaafii harmaan gadii gaafadhe.-
“ABO-n erga dhaabatee waggaa 40 tayeera. Rakkinni ilmaan Oromoo garuu itti fufeera. maalif hamma ammaatti bilisa baasuu dadhabe? Gara fuulduraattis akkamitti ‘uummata Oromoo bilisa baasa?” kan jedhu tere.
“Akka gadaatti, demokraasii irratti hundaayeti ‘uummata bilisa baasa.” jedheeti naa/ nuu deebise.
Mee isinumtuu ilaalaa! “Gadaa” fi “Adda bilisummaa (liberation front)” akkamitti wal faana deemuu dandawu?
“Gadaa”- akka seeratti mirga filamuu fi filuu irratti hundaayee, namni filatame sun yeroo filatame sanatti akka heerri sun hayyamuufitti hojjachuudha.
“Adda bilisa baasaa”- lolee, lolchiisee bilisa baasudha.
Garar bawummaan isaa gabaabinaan kana waan tayeefuu, bilisummaa karaa “demokraasii” tayeen arganna jedhanii amanuun seenaa siyaasaa qorachuu dhabuudha.
Bilisummaa eenyumtuu nama hin badhaasu. Karaa “demokraasitiinis” hin argamu.
(ABO yoo karaa demokraasiitin Oromoo bilisa baasuu barbaade, qawwee lafa kaayee, biyyatti galee harka kennatee, yoo waan hayyamaniif taye paartii isaa dhaabbatee, akka heera biyyaatti (Toophiyaatti) filmaata irratti dorgomee, yoo ‘uummanni filate parlamaa galee, yoo achi keessatti miseensi isaa baay’inaan warra kaan caalee, achi keessatti hoogganaa tayee, bulchaa biyyaa tayee yoo heera biyyatti jijjiruu danda’e qofa.)
Kana waan tayeefuu, ‘uummanni Oromoo hundinuu dhaaba ABO isa dhiiga ijoollee isaatitiin hijaarame gantuufi galtuu, warra maqa kana waamee jiraatu irraa eeggatee, wal gurmeessee bilisa bawuu qaba.
“Siyaasan tarsiimoo, toftaa, galii, olola, murtee, oduu, tarkaanfii,— malee bu’aa buusuu hin dandawu.”
‘Uummatni Oromoo amantiifi naannon, dhaaba siyaasaa addaddaatin hin qoodamu!
Jaboo says:	13/09/2012 at 11:10 pm	@Beekaa Biyyaa,
Gaafffii ati gaafatte kun yaada boodatti haafaafi isa waggaa 40 jennee haasofnu kana keessatti kan jijjirama hin finnne gaafachaa turredha. gaaffii sin gaafadha:
1. Yoo dhaabni si waame hin dhowwaattu yoo ta’e atimmoo maaliif waamuu hin yaaltu?
2. Ati amma dhugaatti gaaftook walga’ii Oromoo kan jedhamu hirmaattee ni beektaa? Ishee kana sammuukeef deebifta
Yoo dandeesse hirmaadhu kanaan achi gaaffii eessanuu nuun dhaqachuu hin dandeenye gaafachuunkee tarii akka ayyaantuu.com ilaaltu mul’isuuf yoo ta’e malee nuun(Oromoo hin fayyadu)
Jaboo says:	13/09/2012 at 11:14 pm	@Waaquma,
galatoom garuu ammayyuu oogganoota balaaleeffachaa deemuu hin dandeenyu. ABO warra ofiin jedhan kamiyyuu kan sitti tole deeggari,humnakee fi maallaqakees hin qusaatiin. Gadaan seera, bilisummaan seera gadaa hojiirraa oolcha ni kabaja. Akka ati jette kana gamaafi gamana hin jiru. Lamaan isaaniyyuu wal deeggaranii saba tokko_saba Oromoo ijaaru
Duulaa says:	14/09/2012 at 12:51 am	waggaa 21 guuttu walgaifii waamichaa goochaa ooluun omaa bu’aa takkalee inqaabuu nuu dhissaa!!
Irree sabaa says:	14/09/2012 at 1:05 am	Waaquma yaadaa bardeeda laafa keese galatoomi!!
Inn biraa waamichii akasi kun yeroo adda addaa godhama ture. waamichii Jaarmiyya oromoofis ta’e Miseensoota dhaaba sababaa addaa addaan dhaaba keesa bahaanif godhamu kun qamin tokkoo isanuma kessa bahee yoo waashookokkisu duwaadha.
Bara QC bara jijjirama waamicha walfakataa akkasituu godhamaa ture. garuu kan waamicha kana fudhatee oromoo hunesee waa achi siqsee hin agaree.
ammalee taannan sun ta’uf hin jiru.
Umman kan gaafataa jiruu Miseensoota dhaabaa dabalatee qabsoon oromoo sumooftee jirtti kootaa waaltajii walitti nufduu tokko nuf ummatti mada rakkoo keenyaa argnee qorchii waalin itti haa barbaanuu jechaa jirra.ammalee fuurtun achumma jirti dura suun deb’uu qabaan jedha.
akumma waamicharrati jedhame namu gaafa achi bahuu waan himate qabaa.waan namuu himatesun ammoo yoo isaafi qabsoo oromoo hin minee durumma keesa hin bahu ture. amma maaltuu jijjiramee ykn furme moo qabsootu laafin irra kara ciminatti jijjiramee waan himatu sana itti gabee waamichaa kana simataa?? tunu gaafidhaa,
dhuga says:	14/09/2012 at 3:27 am	@Waaquma,
dubbii babareedaa lafa keesee. Kun hundaa fi kan kana fakaataan rakkon hundi kun dura hiika argachuu qaba
Lammiwayya says:	14/09/2012 at 10:50 am	Dhaloonni ammaa kuni hojii dadhabee oduutti galee? Kuni qaanii fi salphina guddaadha. ABOn rakkinna xaxaa keessa darbee asga’eera. Mee warrii ABO tti quba qabdu kunii rasaasa dhiisiiti wayyaaneetti dhagaa darbadheera yoo jetta taate asb’ii. Oduu dhageesee ofiikees laaquu dhiistee maaliif wan sirra eegamu hanga humna kee hinhojjettu. Rakkon nutti qabnuu namatti hirkachuu wan barreef yeroo hunduma nama irraa waa eegna malee hanga dandeenyu gumaachuu hinbarbaannu. Yeroo inni tokko hojjetu immoo oduudhan itti teenya malee jabaadhun hinjiru.Han bayye nama aja’ibu Siyyee Abirahhaa inni Mallasaatiin yeroo bayyee dararame warra du’a Mallassatti gamadaan sirriimitti jedhee akka amantana dhaariidhan mormaa jiru meeqan keenyattu beeka. Sababiin isaas yoo ofiif wal-dhaban illee faayyidaa saba isaanii irratti waligaluu.Meeqankeenyatu faayyidaa sabaa keenyaaf jennee waliigalla laata? Bayyeen keenyii dhageenyedhuma odeessina malee maal akka ta’e ille hinbeeknu. Rakkina kana keessaa ofiidhuma keenyaaf ba’uu qabanaa ykn immo baruma baraan qaama biratti quba qabaa umuriin keenya darba.
gurraacha says:	14/09/2012 at 10:44 pm	ball shit
gurraacha says:	14/09/2012 at 10:47 pm	ball shit ok good shit
Gadaa Barii says:	15/09/2012 at 12:01 am	Oromummaa adha nu barsiiftuu?
safuu says:	15/09/2012 at 12:40 am	Gadaa Barii wagaa 20 ol kanuma oloolaa batee amma oromoon dhugaa dhukatee hubatee jira.dubdiin WBO moorati galchuu jedhu dhima kana ilaalichise Gaafi fi debii hogganoon ABO obbo Dawwudi Obbo Dhugaasaa fi Obbo Leeencoon midiyaa adda addaa irrati godhaan caqasii.garuu haagaa yoonati ittin oloolle jira nura dhisii. dubin”ullen gamas kuruupheen gamanna” dhisii sunsi ni olti nibulti male dhugaan numa baati.amma rakoon haarkaa nuqabduu yaadaa Obbo Waaquman asi oolti kahee dubsi
Kuni Dhugaa says:	15/09/2012 at 2:47 am	Obboloonni keenya waamicha ABO dhura dhaabachaa jirtan waan tokkon isin kadhadha. Yoo isiniif hin taane tahe dubbiftanii maliif mataa of dhukkubsitu hin dubbisiinaa dhiisaa.
Ani garuu miseensa ABO gameessa dhiisee keessaa ala taa’u keessaa isa tokko. Kan keessaa na baases bara 2008 gargar fottoquu ABO tahetu dhugaan gara kam akka jirtu na wallaalchisee keessaa bahee akkan irraa ala taa’u na godhe. Amma garuu dhugaan garam akka jirtu akka aduu saafaa natti ifee jira. Kanaafuu waamicha dhaaba koo kabajee itti deebhaan jira. Warri kaanis akkanuma kan itti deebihaa jiran baay’eetu jira. Kanaafuu warri isiniif hin taane yoo jiraattan itti hin rakkatiinaa dhiisaa. As teenyee yoo wal arrabsaa oolle bu’aa maal buusuu dandeenya ? Garuu kabajaa dhaan yoo wal gorsine yookii wal komanne wal amansiisuullee ni dandeenya. Kana waan taheef adaraa keessan yaa obboloota kiyya wal otoo hin arrabsiin kabajaa dhaan walitti haa dubbannu.
Integrator says:	15/09/2012 at 4:24 am	When we do observe the authors and commentators in the Oromo websites, we just do see two groups of Oromo nationalists and scholars: the ANTAGONIZERS and the INTEGRATORS. The antagonizers do pray the mantra of polarizing the Oromo liberation forces presenting them as if they are irreconcilable enemies being divided into two Oromo camps: pro-union and pro-independence. Usually the antagonizers cry as if the pro-union Oromo are collaborators to the Abyssinian camp. On the other hand, the integrators do look at the two post-bilisummaa Oromo goals (independence/walabummaa vs union/walfaanummaa) of the Oromo as two sides of the same coin (two sides of bilisummaa); they try to assert that both the pro-independence and the pro-union Oromo nationalists are de facto pro-bilisummaa (freedom fighters), who do have two reconcilable alternative objectives. Interestingly Woyane foot soldiers try to camouflage as pro-independent Oromo and curse the pro-union nationalists or the vice versa just for the sake of sawing a discord in Oromo liberation camp.Ttheir motive is clear: Oromo should be divided, antagonized and polarized in order to be kept weak and ruled. What is pity here is that some of our nationalists and scholars simply fall in this trap of the Woyane cadres and do the bidding of our enemy without any payment. Actually Woyane has hired a lot of cadres doing the antagonizing job with the millions of dollars being invested on this project. May God open the eyes of our fool antagonizer Oromo nationalists, who are still doing the job of Woyane without payment!
jajjaboo sabaa says:	15/09/2012 at 2:42 pm	Gaafilee banaa 12 gara Qondaalota Oromoo hundaaf(Lencoo) Lataa
by Jajjaboo Sabaa on Wednesday, August 29, 2012 at 5:35pm
Amajjii 1 bara 2012 irraa egaluun odeefannoon marsaalee internet irratti hogganoota siyaasa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) fi haayyolii oromiyaa barresaa jiran fi akkasumas raadiyoo fi televisiyonaan ibsi kennaman akka gaafile 12 armaan gadii gara injineera Yohaanis Lataa erguuf na dirqaniru.
1. Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hundeesu kessatti qoodi Elemoo Qilxuu, Mullis Abbaa Gadaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, jeneraal Taaddasaa Birruu, fi Magarsaa Barii hangam ture? Jechuun, qoodi hogganoota kanaa warra jaarmaa ABO bu`reesine jettanii ofi himtaniin gadii, wali-qixa, yookis daran?
2. ABO isin bu`reesitan dhugumaan ummata Oromoo bilisomsuuf yookis jaarmolee siyaasa Habashaa (Amaara + Tigiree) kanneen akka AESM, EPRP, fi kkf mormuun jiraachuuf?
3. Dr. Baaroo Tumsaa fi Badhoo Dachaasaa yeroo tokkotti bakkuma tokkotti galaafatamuun isaanii akkamiin raawatame? Wali-ajjesanii, ofi-ajjesanii, yookis ni ajjefaman?
4. Sababiin ABO kessaa gartuun Adda Bilisummaa Islaama Oromoo (ABIO) dhalchee maaliree? Garaa-garummaa ilaalcha siyaasa QBO yookis galaafatamu Dr. Baaroo fi Badhoo irraan oloola maqa-walixurresii irraa walishakuu fi waliyakkuu kessaan dhalate?
5. Miltolee ABO kanneen turan Shaabiyaa (EPLF) fi Wayaane (TPLF) dirree waranaa irratti Oromoo motummaa Darguuf lolaa turan yeroo boojiyan maalif boojiyamtoota waranaa gara ABO hin dabarsine?
6. Tarsimoon ABO cinaan jaarmaa gantotaa, dhaabbata dimokirasii ummata Oromoo (OPDO) ijaaruu enyuun karoorfamee fi raawatame?
7. Hogganaan waraana Wayyanee, gabiromfatichi Hayaloom Lagasaa bara 1992 kessa miseensa koree gidduu ABO fi hoggana Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) kan ture Gammachiis Dhaabaa (kitaaba Gotoota Oromiyaa: fuula 89 – 95) gara waajjira Wayaanee (TPLF) dirree Ngalee Boranaatti waamee haxummaan akka ajjeesuuf enyuu kan ajaja dhoksaan dabarse? Isaayaas + Malasaa yookis Malasaa + Lencoo yookis Lencoo + Daawuud?
8. Gammachiis Dhaabaa gotummaan hidhanoo kiyya hin hikkadhu jechuun ergii wareegameen bodaa fi yeroo qondaaloti ABO bakka maratti loltuu Wayyaneen dorsifamaa turan maaliif murteen WBO gara moraatti galchuu karoorfamee fi raawatame?
9. Ergii WBO moraa galfamee dinaan marfamee, rukutamee, ajjefamee, boojiyamee, fi facaween booda hogganni ABO sadarkaa olii nagumaan xiyyaara koruun gara biyya alagaatti baqatuun sun ummata Oromo hin qaaneesine fi yelloon kun hogganummaa ABO qulqulina hin dhorkuu?
10. Bara 1993 irraa egaluun walidhibdee jarmaa ABO kessatti babalate irraa dhalachuu gartulee Qaama Ce`umsaa ABO, Jijjirama ABO, fi Waltajjii Marii Oromoof (WMO/ODF) sababiin maali? Garaa-garummaa ilaalcha siyaasa QBO, Hayyu-durumaan ABO hogganuuf dorgomuu, yookis malaa-maltummaa hogganummaa?
11. Beekaa yookin osoo hin beekin dogongorri hogganummaa moraa ABO kessatti raawatamaa turee fi jiru kun hojii QBO laamshesera; garuu badiilee kanaaf sadarkaan gaafatamummaa Yohaanis (Lencoo) Lataa, Yohaanis Bantii (Galasaa Dilboo), fi Firewu Ayyaana (Daawud Ibsaa) wali ni gitaa? Yakkoota hojii QBO irratti raawatamaniif mana murtii senaa irratti kan himatamuu qabu jarmaa ABO yookis hogganoota ABO waliin mariyatuun qajeelfama dogongore karoorsun gara hojiitti hikuun umurii motummaa gabiromfataa dheresaniidha?
12. Dogongorri tarsimoo waraanaa karaa jeneraala Gobanaa Daacee raawatame sun Itophiyaa ilaalcha Amaarummaan dhunfatamtee turte hundeesuf akkuma senaa jarraa tokkoo kessatti qooda sadarkaa olii qabatee jiraate sana: dogongorri tarsimoo siyaasa QBO karaa injineera Yohaanis Lataa hogganamaa jiru kun,Itophiyaa ilaalcha Tigirummaan dhunfatamte hundeesu fi tiksuuf qooda sadarkaa olii qabatee jira mitii?
Mullis Abbaa Gadaa fi ilmaan Oromoo haqaaf wareegaman maraaf!
kumsaa morodaa says:	01/10/2012 at 11:53 am	miseensaa ta’uuf akkamiin danda’a ?
DIRREE says:	10/11/2012 at 4:54 am	Hundumaarra caalaa, nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay’atu. Ani kanan gaddu Oromoo ta’uu koof osoo hin taane, Oromoon tokkummaa dhabuu keenyaafii. Haa ta’uu, isa darbe dhiifnee gara fuula duraatti socho’uuf, ammas tokkummaan nu barbaachisa. Nama hoogganaa ta’e tokko gorsuu fi yaada tumsu kennuufiirraa kan hafe, as deebinee- hamachuu, qeequu, yaadaan gargar ba’uu fi kan koo maaf fudhachuu dide jennee isa hoogganummaarra keenyarraa yaadaan gargar ba’uun nama hubataa fi sammuu nagaa qabu biraa kan eegamu miti. Yoo kana goona ta’es, yoomiyyuu milkaawuu akka hin dandeenye hubachuu qabna. Waaqayyo nu haa fayyisu!!!
Waarri ABO hoogganuuf aboonii fi adaraan isinitti kennamemmoo, waan sabni keessan isiniin jedhan dhaggeeffachuu fi ummatni maal jedhaa jira isa jedhu beekuun isinirraa eegama. Kana malees, nama hundumaa gammachiisuuf awaan hin danda’amneef, ‘garri caalu maal jedha?’ isa jedhu ilaalaa jechuu kooti. Lammaffaa nama kaayyoo ta’aa. Kunis, wareegama malee milkaayinni jira jennee yaaduun gowwummaa dha. kanaaf, ‘Gurella fghters, who are devoted to the level of self secrification’ qabaachuu qabdu. Hundumaarraa caalaa, qabsaa’ota ABO warra turanii fi ammas garee mormituu ta’anii, dhugaatti bilisummaa saba keenyaa ‘abbaa biyyummaa Oromiyaa’ kan deggeran hunda waliin, ifaanis ta’e harka wayyaa jalaatiin hariiroo uummachuun keessan daran nama gammachiisaa itti fufaa.
Garuu, akka yaadaatti kanan isiniif kaasuu barbaadu (yoo isin fayyade ni fudhattuu), Olaantumma bulchiinsaa Oromoon Oromiiyaa keessatti daangaa tokko malee akka qabaatuuf tattaafachuun bayeessa. Kaayyoo ofii hunda hin ibsan. Isa namoota baay’ee walii galchuu danda’uu fi diina baay’ee namaaf hin horre filatanii deemuun ammoo gamnummaa natti fakkaata. “kan keessa ofii, ofuma keessatti qabatanii, daandii itti diina Oromoo kan taate wayyaanee itti cabsuu dandeenyu qofarratti oso xiyyeeffannee daran gaarii dha akka kootti. Kanaaf, mormitoota kamii wajjin hariiroo uummattanii, diina hundee jabeeffattee ummata keenya doodessaa fi gadachaa jirtu kana nurraa calaasuuf keessaa fi alaa harka wal qabachuun daran barbaachisaa dha.
Dirree Qabsoo irraa
WAANTAANEMOO says:	26/12/2012 at 7:06 pm	“Gaalli yoom bade Jennaan, gaafa morma dheerate” jedhan. Gaafni dhaabni Abo diigame gaafa hoggantummaan nama dantaa isaatiif yaadutti kennamte. Jechuun Dhaaba siyaasaa gara giddu galeessa diinagdee/dollar.
Anuwar says:	18/01/2014 at 8:08 am	Ha turtu malle qabson tenya hin cittu gabrumma nafxanya jala ni bana obsi oromo WBO irre te cimsadhu injiffanon tetuma
Lencho Dhugomsa says:	27/07/2014 at 1:00 pm	Oromoon bilisoomuuf tokkoomne kaanee du’a sodaachuu dhiifnee duune ajjeefnee dhaloonnii boodaa bilisummaa haadhaalu!Rakkoon keenya inni guddaan du’a sodaatuudha, kanaafuu,kaanee dhawuudha,lammiin oromoo kan imal deemu bakka deemutti ABO dha ja’amee ajjeefama jira.
bonsa saba says:	05/11/2014 at 2:24 pm	yaa oromoo jaabaadhaa dukkana booda ifaatu jiraa jaabaadhu ni mootaa …………………………………….